‘मानसिक रोगलाई लुकाउनु हुँदैन्’ : डा. कपिलदेव उपाध्याय – Online Jagaran
‘मानसिक रोगलाई लुकाउनु हुँदैन्’ : डा. कपिलदेव उपाध्याय
६ चैत्र २०७६, बिहीबार १०:०८ March 19, 2020 जागरण
‘हाम्रो समाजमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भन्नेबित्तिकै पागलपन भन्ने बुझाई अझै पनि हावी भएको देखिन्छ् ।’ यो समस्या बारे जानकारी हुँदा–हुँदै पनि मान्छेहरु मनोचिकित्सक कहाँ पुग्न ‘हिच्किचाउँछन् ।’ कारण हो, समाज, साथीभाइ र परिवारका सदस्यले फरक दृष्टिकोणले हेर्छन भन्ने ठूलो तनाव । ”जसले गर्दा रोग थप बल्झिदै जान्छ् । यो खास कस्तो रोगहो भन्ने अफै पनि सबैजसोलाई जानकारी नै छैन् ।”
‘पछिल्लो समय मानसिक समस्यालाई जटिल स्वास्थ्य समस्याका रुपमा लिने गरिएको छ् ।’ यस्को अबस्था कर्णालीमा पनि झन विकराल बन्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ् । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर २४ गते सम्म मात्र प्रदेश अस्पतालमा १५ सय ६० जना उपचारका आएका छन् ।
सल्यान जिल्ला अस्पतालले दिएको तथ्याङ्क अनुसार मंसिर महिना सम्म १ हजार ३ सय २९ जनामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखा परेको देखिन्छ् ।
जाजरकोटमा पुरुषको तुलनामा महिलालाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या ७० प्रतिशत धेरै रहेको देखिन्छ् । ”मानसिक स्वास्थ्यतथा परामर्श केन्द्र–नेपाल (सी.एम.सी–नेपाल) ले केहि समय अघि आयोजना गरेको मानसिक स्वास्थ्थ शिविरमा जम्मा १ सय २७ जना मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा परेका व्यक्ति भेटिएको थिए । यस्तै जिल्ला कारागार दैलेखमा रहेका १२ जना महिला कैदी बन्दी मध्ये ९ जनामा आत्तिने र २ जनामा डिप्रेसनको समस्या देखिएको थियो । ‘अझै पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका विरामिहर धेरै नै भएपनि उपचार गर्न नआउने गरेको पाईन्छ् ।”
खासमा मानिसक स्वास्थ्य समस्या रोग कस्तो रोग हो ? कसरी निको पार्न सकिन्छ् ? र, ”साथमा अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको (कोभिड–१९) कोरोनाभाईरसको” विषयमा मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र (नेपाल (सी.एम.सी नेपाल) का वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. कपिलदेव उपाध्याय सँग पंखबहादुर शाहीले कुराकानी गर्नुभएको छ् ।
सुनौँ अडियो :
माध्यमिक शिक्षा परिक्षा स्थगित
१ भाद्र २०७६, आईतवार १९:४२ August 18, 2019 जागरण
१४ आश्विन २०७६, मंगलवार ०७:५८ October 1, 2019 जागरण